Abalimi bezithelo bangangeza inani izithelo zabo ngochungechunge lwezinqubo. Izithelo zingomiswa, zigotshwe, zenziwe izimbotshana, zisulwe, zenziwe ushukela noma zigayiwe. Ukucutshungulwa kungenzeka kwenzeke epulazini, njengoba kwenzeka ngezithelo eziningi ezomisiwe, noma eduze kwepulazi, njengoba kwenzeka ngezithelo ezikheniwe.
Kunombono ongelona iqiniso wokuthi kuphela izithelo ezingavunyelwe emakethe entsha ziyacutshungulwa. Ngenkathi izithelo ezisezingeni eliphansi kakhulu zingagcina ziyimakethe yejusi noma zenziwe zibe ngama-roll rolls, i-puree ebekelwe imakethe yokudla kwezingane ngokuvamile iyindinganiso enhle kakhulu. Izinga lekhwalithi yokuwafaka kanye nemakethe eyomile nalo liphezulu ngokuya ngekhwalithi yezithelo nosayizi.
Yize izinhlobo ezimbili zikhona futhi izithelo eziningi ezingenzi ibanga emakethe entsha zicutshungulwa, izinhlobo eziningi zenzelwe ikakhulukazi ukusetshenziswa okuthile, njengokufaka ngotshani noma ukomisa.